बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल चलाउनु हुन्छ हानिकारक, निम्त्याउन सक्छ यस्ता गम्भीर समस्या ! – Krazy NepaL
बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल चलाउनु हुन्छ हानिकारक, निम्त्याउन सक्छ यस्ता गम्भीर समस्या !
April 15, 2021 494
प्रविधिको एक ठूलो फड्को हो मोबाइल फोन। संसारलाई सानो बानाउने एउटा सानो यन्त्रको विभिन्न फाइदा छन्। तर आजको समयमा यसको अत्यन्त धेरै प्रयोग हुँदै छ। हाम्रो जीवनको एक हिस्सा नै बनेको छ मोबाइल फोन। बिहान उठे देखि राति नसुतेसम्म हाम्रो हातमा मोबाइल हुन्छ। खाली समयको टाइम पास पनि मोबाइल नै बनेको छ।
कतिपय मानिस बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल चलाउन थाल्छन्। तर यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक साबित हुन्छ। जान्नुहोस् यसबाट हामीलाई पर्ने नकारात्मक असरका बारेमा….
मोबाइलबाट निस्किने किरणले हाम्रो आँखामा नकारात्माक असर पार्छ। त्यसैले, धेरै मोबाइल हेर्दा आँखा र टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने जस्ता समस्या उत्पन्न हुनसक्छ, जसको कारणले मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर गर्न सक्छ।
अन्य समयको तुलनामा बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल प्रयोग गर्नु निकै खतरनाक साबित हुनसक्छ। नियमित रूपमा यसो गर्नाले मानिस डिप्रेशनको शिकार पनि हुनसक्छ। बिहानको समयमा हाम्रो दिमागले हरेक कुरा छिटै लिन नसक्ने हुँदा सकारात्मक कुरामा फोकस गर्नु राम्रो हुन्छ।
बिहानको समयमा उठ्ने बित्तिकै मोबाइल प्रयोग गर्दा त्यसबाट निस्किने विकिरणले अरु समयको तुलनामा आँखा र दिमागलाई छिटै असर गर्छ। र यसको नकारात्मक प्रभाव दिनभर कार्यक्षेत्रमा पर्न सक्छ, जस्तै मानसिक तनाब बढ्नु, कार्यमा राम्रोसँग केन्द्रित हुन नसक्नु आदि।
बिहानको समयमा मोबाइल प्रयोग गर्दा मानिसमा दिनभर चिडचिडापन रहन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल हेर्दा मोबाइलबाट आउने विकिरण, रङ्गिन फोटो, चित्र आदिले सीधा मस्तिष्कलाई असर गर्छ। यसले गर्दा रिस उठ्ने, तनाव हुने, अनियन्त्रित हुने लगायतका समस्या देखा पर्न सक्छ।
Prevचामलको माडले पनि बनाउँछ अनुहार चम्किलो र मुलायम, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
आज ०४ साउन २०७८ सोमवारको राशि’फल अति राम्रो छ हेर्नुहोस्
आज ०३ साउन २०७८ आइतवारको राशि’फल अति राम्रो छ हेर्नुहोस्